Iwo anochengetedza machira zvitupa zvaunofanira kuziva | Bezzia
Maria vazquez | 28/08/2021 10:00 | Nhau, fashoni
Kune vazhinji vedu nhasi vanoteerera pfungwa yekusimudzira munyika yefashoni. Pfungwa yakaoma iyo yatinoedza kuburitsa imwe mwenje nekugovana newe iwo manyama akabatana yemakambani emafashoni akasimba anotanga, uye akakosha machira zvitupa mumashure.
Munyika mune chiuru nechiuru yakagadzikana uye ecological machira zvitupa. Hazvigoneke kuti tizive zvese, asi kuzivisa kwakakosha ndiko kwakakosha kuti vasatinyengere. Zvekuzvidira uye zvinozivikanwa padanho reEuropean, vamwe, padanho repasi rose vamwe, vanozivisa zviri pamutemo uye vanopupura kuti nguvo iyi inogadzirwa nenzira inoremekedza nharaunda uye / kana nevashandi.
1 MAGOTI (Global Organic Textile Standard)
2 Organic Zvemukati Standard (OCS 100)
6 Global Kuzvigadzira Patsva Standard
7 PETA-Yakatenderwa Vegan
MAGOTI (Global Organic Textile Standard)
GOTS ndeimwe yeanonyanya kufarirwa machira zvitupa. A muyero wepasi rose yakagadzirwa nenhengo dzeindasitiri yemachira nemamwe masangano, pamwe nekubatana kwe IFOAM (International Federation yeOrganic Agriculture Movements) kuti vabvumirane pane zvinowirirana nzira dzinogona kushandiswa pasi rese.
Kuti uwane ichi chitambi kurondwa kwehembe kunofungidzirwa kubva kuunganidzwa kwezvinhu zvakagadzirwa kusvika panguva yekugovera uye kushambadzira. Iyo ine GOTS chisimbiso che 95 - 100% organic uye imwe ye 70 - 94% organic. Chigadzirwa chemachira chakanyorwa GOTs giredhi "organic" chinofanira kuve neinosvika 95% yakasimbiswa organic fibers. Izvo zvakanyorwa kuti "zvakagadzirwa nezvinhu zvakasikwa", zvakadaro, zvinofanirwa kungova ne70% yakasimbiswa michero yehupenyu.
Uye zvakare, iyo GOTs chisimbiso inosimbisa kuti kwave kuripo kuzvipira munharaunda munharaunda yega yega yeketani yekugadzira. Kuona kuti izvi zvese zviyero zvasangana, makambani ese uye vagadziri vanofanirwa kuongororwa kamwechete pagore.
Organic Zvemukati Standard (OCS 100)
Iyo Organic Yemukati Standard (OCS) yakavakirwa pane iyo yechitatu bato kuongororwa kweiyo chaiyo huwandu hwechimwe chinhu zvakasikwa zvakakura zvine chigadzirwa chekupedzisira. Inoshanda kune chero chisiri chikafu chigadzirwa chine 95-100% organic chinhu.
Icho chiyero cheiyo IVN (International Association ye Natural Textile Viwanda). Inovhara ese matunhu ekugadzirwa kwemachira nezve kuzadzikiswa kwezvakatipoteredza maitiro uyezve enharaunda maficha. Inofungidzirwa seyakaomesesa muyero uripo parizvino weiyo organic machira chitupa. Inoda 100% yeiyo tambo inoshandiswa kuve yakasimbiswa ecological uye zvakare inodzvinyirira kupfuura chero ipi zvayo maererano nezvinhu izvo zvinorambidzwa kana kudzivirirwa.
Yakagadziriswa neOEKO-TEX Association, boka rekutsvagisa uye marabhoritari muEurope neJapan, rinotarisana ne kukamurwa kwezvimwe zvinhu zvinokuvadza panguva yekugadzira uye mukuona kuti izvi zvinogumira zvasangana.
Chiyero 100. Inozivisa kuti zvigadzirwa zvemachira hazvina zvinhu zvinokuvadza kuhutano.
Step. Sustainable Textile & Leather Kugadzirwa. Iyo modular certification system yezvigadzirwa zvekugadzira mune yekumachira uye yeganda indasitiri. Chinangwa chayo ndechekushandisa kwenguva refu-nharaunda zvine hushamwari zvigadzirwa zvekugadzira, kusimudzira hutano uye chengetedzo, uye kusimudzira mamiriro ane hukama munharaunda anoshanda.
Yakagadzirwa muGreen. Imwe neimwe Yakagadzirwa neGreen tagged chinhu inogona kuteverwa uchishandisa yakasarudzika chigadzirwa ID kana QR kodhi. Chikwata chinopa mukana wekuwana ruzivo nezve zvivakwa zvekugadzira uko chinhu chakaburitswa, nhanho yekugadzirwa kune ino nzvimbo, uye nyika dzakagadzirwa. Ndiyo chiziviso chemuEurope chete chinofunga nezve nharaunda nhatu dzekugadzirwa: hutano, nharaunda uye kodzero dzevashandi.
Ndiyo European Union chitupa chinoona izvo zvigadzirwa izvo inovimbisa yakakwira nhanho yekuchengetedza zvakatipoteredza. Kune izvi, maitiro ese anotorwa mukufungwa, kubva pasarudzo yezvigadzirwa kusvika kune tsvina inogadzirwa. EU Ecolabel inosimudzira hupfumi hwakatenderera nekukurudzira vagadziri kuti vagadzire marara mashoma uye CO2 panguva yekugadzirwa. Inokumbirawo kugadzirwa kwezvigadzirwa zvinogara, zviri nyore kugadzirisa uye kudzokorora.
Global Kuzvigadzira Patsva Standard
Global Kuzvigadzira Patsva imwe yeimwe yekuzvidira machira zvitupa. Inovavarira kuzadzisa zvido zvemakambani ari kutsvaga tarisa zvadzoreredzwa zvemukati yezvigadzirwa zvayo uyezve zvemagariro, zvakatipoteredza uye zvemakemikari maitiro mukugadzirwa kwezvigadzirwa.
AMSlab yakabatana nesangano rePETA, yakagadzira nzira yekudzora kuti ikwanise kuongorora iyo kusavapo kwezvigadzirwa zvemhuka mune zvipfeko, shangu uye zvishongedzo pasi peiyo vegan standard. Ichi ndicho chisimbiso che "Vegan Product", icho chinobvumira vatengi kukurumidza kuziva aya marudzi ezvinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Iwo anochengetedza machira zvitupa aunofanira kuziva